संयुक्त राज्य अमेरिका मा महिला | USAHello | USAHello
संयुक्त राज्य अमेरिका मा महिला
संयुक्त राज्य अमेरिका मा महिला पुरुष बराबर हो. तर पुरुष र महिला जीवन अनुभव भिन्न छन् जो धेरै तरिका छन्. महिला अधिकार बारे पढ्नुहोस्, वस्त्र, र महिला दुरुपयोग. काममा महिला अनुभव बारे जान्नुहोस्, गृह र भइरहेको बच्चाहरु संग.
महिला अब व्यवहार बाटो यो थियो भन्दा धेरै फरक छ 50 धेरै अगाडी. त्यती बेला, छोराछोरी र मानिसहरू काम गर्न गए संग महिलाहरु घरमा बसे. 1960 को र प्रारम्भिक 1980 को दशक बीच, महिला उत्तिकै उपचार गर्न लडे. तिनीहरूले sexism ध्यान ल्याए, जो मानिसहरू को रुचि उपचार छ. महिला विरोध मा सडकमा marched. तिनीहरूले गर्भपतन र बलात्कार महत्त्वपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन गर्न लडे. ती सृष्टि र महिला रूपमा आफ्नो अनुभव बारे कला र संगीत साझेदारी. यो महिला लिबरेशन आन्दोलन भनिन्थ्यो. यो संयुक्त राज्य अमेरिका मा उपचार गरियो कसरी महिला परिवर्तन.
अमेरिकी समाजमा, महिला बराबरी र मानिसहरू जस्तै अधिकार. महिला पुरुष जस्तै जब सक्छ. महिला देखि संयुक्त राज्य अमेरिका मा मतदान गर्न सक्षम छन् 1920. महिला निर्वाचित अधिकारीहरु रूपमा सेवा गर्न सक्छन् र सम्पत्ति गर्न सक्छन्. तिनीहरूले सैन्य सेवा गर्न सक्नुहुन्छ. तर त्यहाँ अझै पनि नेतृत्व स्थितिहरू महिला अभाव छ. महिला माथि बनाउन 51% जनसंख्याको. तर एक महिला कहिल्यै अध्यक्ष गरिएको छ. मात्र 19% कांग्रेस को (संघीय सरकारको एक भाग) र 21% विधायकों को (राजनीतिक नेता को एक प्रकार) महिलाहरु. यो महिला अधिकार लागि हानिकारक हुन सक्छ. कहिलेकाहीं निर्णय महिला स्वास्थ्य र व्यक्तिगत छनौट असर ज्यादातर मानिसहरू द्वारा गरिन्छ.
अमेरिकी महिला कर्मचारीहरु को एक महत्वपूर्ण भाग हो. लगभग तिनीहरूले बनाउन अप 50% कामदारहरूको को. महिला जब को सबै प्रकार मा काम. त्यहाँ मात्र मानिसहरू लागि वा केवल महिलाहरु को लागि कुनै जब छन्. तपाईं एक महिला हाकिम हुन सक्छ. तिनीहरूले अघि काममा आरोप मा एक महिला थिए कहिल्यै भने यो केही शरणार्थी र आप्रवासी लागि गाह्रो छ. तर संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक काम प्राप्त गर्न, तपाईं स्थिति को लागि योग्य हुनुपर्छ. यो र हाकिम लागू थियो छ जसले मतलब काम को लागि साक्षात्कार. तपाईं धेरै राम्रो गर्ने मालिक छ भने, तिनीहरूले एक मानिस वा एक महिला छन् किनभने यो छैन, तर किनभने तिनीहरूले आवश्यक सीप कमी.
तर, यो महिला पुरुष संग पूरा समानता छ होइन. त्यहाँ सम्म कम महिला कम्पनी निर्देशक पुरुष कम्पनी निर्देशक भन्दा हुन्. महिला सामान्यतया मानिसहरू भन्दा कम कमाउने. तिनीहरूले नै काम मा काम गर्दै हुँदा पनि यो सत्य हो. महिला कहिलेकाहीं तिनीहरूले पाउनुपर्ने पदोन्नति प्राप्त छैन.
धेरै अमेरिकी महिला पनि काम-जीवन सन्तुलन सङ्घर्ष. जस्तै, तिनीहरूले पनि आफ्नो परिवारको हेरचाह गर्दा एक कठिन समय काम छ. थप पढ्नुहोस् काममा महिला.
अमेरिकी पुरुष र महिला सामान्यतया परिवारमा कर्तव्य र घरधन्दा साझेदारी. एक परिवार मा, मानिस र महिला शायद दुवै घर बाहिर काम. संयुक्त राज्य अमेरिका मा घरमा को करिब आधा मा, दुवै आमाबाबुले पूर्ण-समय जब काम. घरमा, आमा र बुबा अक्सर दुवै लाँड्री के, भाँडा, खाना पकाउने, र बच्चाहरु को हेरविचार. थप पढ्नुहोस् संयुक्त राज्य अमेरिका मा बाबु आमा.
जब महिलाहरु बच्चाहरु छन्, तिनीहरूले काम बन्द समय प्राप्त. यो प्रसूति बिदा भनिन्छ. सबैभन्दा महिलाहरु प्राप्त3कामबाट बेतलबी बिदा को महिना. केही कम्पनीहरु कर्मचारीहरु आफ्नो तलब एक भाग तिर्न. आफ्नो प्रसूति बिदा भन्दा भएपछि, अमेरिकी महिला काम गर्न पछाडि जानुहोस्. तिनीहरूले अक्सर भुक्तान चाइल्डकैअर आफ्नो बच्चाहरु र तिनीहरूले काम गर्दा छोराछोरीलाई लागि.
केही अमेरिकी महिला पनि आफ्नो साझेदार देखि घरेलू हिंसा वा दुरुपयोग सामना. महिला तेस्रो बारेमा तिनीहरूले दुरुपयोग गरिएको छ भनेर भन्न. यसलाई थप हुन सक्छ, धेरै महिलाहरु डराएको वा दुरुपयोग बारेमा कुरा गर्न लज्जित छन्. महिला विरुद्ध दुरुपयोग र हिंसा, मानिसहरू, वा छोराछोरीलाई अवैध छ. कसैले दुरुपयोग को दोषी छ भने, तिनीहरूले जेल जाने सक्छ. बारेमा जान्न अमेरिकी कानून.
तपाईं एक सम्बन्धमा र आफ्नो साझेदार द्वारा दुरुपयोग भइरहेको छ भने, कल गर्न सक्छन् राष्ट्रिय घरेलु हिंसा हटलाइन सहयोगको लागि 24 घण्टा एक दिन. तपाईंले आफ्नो नाम दिन छैन.
संयुक्त राज्य अमेरिका मा महिला अन्य संस्कृतिका महिला बाट अलग पोशाक सक्छ. तिनीहरूले सक्छन्, जस्तै, प्यान्ट लगाउने वा तिनीहरूले छाला देखाउँछ कि वस्त्र लगाउने सक्छ. अमेरिकामा, वस्त्र प्रकट एक महिला मा गरिबी प्रतिबिम्बित गर्दैन लगाएका. यो पनि महिलाको चरित्र बारे कुनै अर्थ छैन. महिला सामान्यतया स्टोर देखि लुगा किन्न. तिनीहरूले आफूलाई रोप्न छैन र तिनीहरूलाई पेशेवर छैन सिलना छन्. यो केवल विशेष अवसरका लागि हुन्छ. महिला सामान्यतया किफायती लुगा र केही वर्ष भित्र तिनीहरूलाई प्रतिस्थापन.
कुल मिलाएर, संयुक्त राज्य अमेरिका मा वस्त्र शैली आकस्मिक छ. धेरै महिला र पुरुष जिन्स सबै भन्दा दिन लगाउने. केही महिला काम वा विशेष अवसरमा बाहिर अप लुगा छैन. अमेरिकामा केही कार्यस्थल पनि आकस्मिक छन्, विशेष गरी शहर मा. कहिलेकाहीं, साना मान्छे पनि काम गर्न Sweats वा स्कूल लगाउने सक्छ.